मधुपर्क जेठ, २०६९ पिरामीडहरुको हूलमा हराउँदा - राजुबाबु श्रेष्ठ २० मे कायरो भ्रमणको पहिलो दिन । अधिल्लो दिन राति मात्र कायरो आइपुगेका थियौँ मित्र सुरेन्द्र मैनाली र म । कायरो एअरपोर्टदेखि होटलसम्मको यात्रामा नै कायरोको भव्यताको आँकलन गरिसकेका थियौँ हामीले । सहरको झिलिमिलीले हामी दुबैलाई अनौठो आनन्द मिलेको थियो । यद्यपि हामीलाई कायरोको आधुनिकताभन्दा त्यहाँको प्राचीन पिरापीडहरू हेर्ने उत्सुकताले कुत्कुत्याएर ल्याएको थियो कायरो । बिहानै सातै बजे होटेलको अगाडि आइपुग्यो डिलक्स ट्राभल्सको गाडी । हामी पनि ब्रेकफास्ट सकेर होटलको लवीमा पुगिसकेका थियौँ । एउटा हसिलो, फूर्तिलो लक्काजवान गाडीबाट ओर्लेर सरासर हामी नजिक आई अभिवादन गर्‍यो । लवीमा नै सामान्य परिचय भयो । ऊ हामीलाई आज दिनभर पिरामीड क्षेत्र घुमाउन गाइडको रूपमा खटिएको रहेछ । पिरामीड हेर्ने रहर बोकेका हामी हतारिँदै गाडीभित्र पस्यौँ । हाम्रोलागि मात्र पठाइएको रहेछ त्यो गाडी पनि । कायरोको चिल्लो सडकमा कुद्न थाल्यो गाडी । कुराकानी गर्दै जाँदा थाहा भयो २९ वर्षे अहमद अझै अविवाहित नै रहेछ । कायरोमा कोठा भाडामा लिएर बसेको उसले गाइड पेशा अँगालेको ७ वर्ष भैसकेछ । अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नेहरूका लागि राम्रै कमाइ हुँदोरहेछ इजिप्टमा । गाडीको गतिसँगै हामीलाई सहरका बारेमा बताउँदै थियो अहमद । केहीबेरको कुदाइपछि सहरका घरहरू हामीसँग टाढा हुँदै थिए । सहरसंँगै रहेको खेतीयोग्य जमिन हाम्रा आँखामा टासिइसकेको थियो । कुराकानी गर्दै जाँदा हामीबीच एउटा नजानिँदो किसिमले निकटता बढेको थियो । निकै फरासिलो र मायालु रहेछ अहमद । "२९ वर्षसम्म पनि किन बिहे नगरेको तिमीले ? बिहेपछिको रमाइलो त साहै्र सम्झनायोग्य पो हुन्छ त अहमद" मैले उसको निजी कुरा बुझ्ने अभिप्रायले प्रश्न तेस्र्याएँ । "बिहेपछि समस्या आउँछ, अहिल्यै त्यो समस्या किन बोक्ने सर Û" उसले हाँसेर जवाफ फर्कायो । "कसले भन्यो तिमीलाई ? खै हामी दुवै विवाहित हाँ, हामीलाई त कुनै पनि समस्या छैन त Û" मैले फेरि प्रत्युत्तर लगाएँ । "सर Û हाम्रो देशमा बिहे गर्न अलि गाह्रो छ । मेरो त कायरोमा घर पनि छैन, फेरि बिहेका लागि खर्च पनि त चाहियो ।" उसले बोल्यो ।
"उसो भए कहिल्यै पनि बिहे नगर्ने त ?" म फेरि बोलेँ । "गर्ने, तर दुईचार वर्षपछि गर्ने ।" उसले जवाफ फर्कायो । "दुई/चार वर्षपछि गर्दा चाहिँ समस्या हुँदैन त ?" सुरेन्द्रले कुरो खोतल्ने प्रयास गर्‍यो । "त्यो बेलाको कुरा देखाजाला ।" ढुक्कसंँग बोल्यो ऊ ।
"तिमीसंँग केटी साथी छ कि क्या हो ?" मैले फेरि कोट्याएँ उसलाई ।
"छैन ।" छोटो उत्तर दियो । "तिमी त गाइड मान्छे, कति विदेशी केटीहरू पनि आइरहन्छन् सम्बन्ध त बन्यो होला नि ?" मैले जिस्क्याएँ । "हाम्रो धर्ममा अरूसंँग सम्बन्ध राख्ने अनुमति छैन सर ।" ऊ मुस्कुराउँदै बोल्यो ।
"लुकेर त हुन्छ होला नि ।" मैले अझै थप्न खोजेँ । "लुके पनि अल्लाहले देखिहाल्छन् नि Û" उसले हाँसेर फर्कायो ।
"उसो भए यहाँका मान्छेहरू अरू केटीहरूसंँग सम्बन्ध राख्दै राख्दैनन् त ?" मैले अझै प्रश्न तेस्र्याएँ । ऊ केहीबेर र